Dib u habeynta arrimaha mudnaanta la siinayo, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Dad badan - oo ay ku jiraan kuwa inaga mid ah oo jooga wasaaradda xoolo dhaqatada - ayaa raadinaya farxadda meelaha qaldan. Annaga wadaad ahaan, waxaan rabnaa inaan ka helno kaniisad weyn, wasaarad waxtar badan leh badanaana ku ammaana asxaabteena ama xubnaha kaniisadda. Si kastaba ha noqotee, si aan micno ugu samaynayno - halkaas farxad kama heli doonno.
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan idinla wadaagay waxaan u maleynayo inay ugu horreeyaan dilaaga adeegga Masiixiyiinta - sharci ahaanshaha Waxaan aaminsanahay in ahmiyadaha beenta ahi ay daba socdaan isla markaaba. Bawlos wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha mudnaanta u leh warqaddiisa uu ku qoray Filibiin. Wuxuu yidhi: Laakiin waxaan kasbaday waxay ahayd inaan u arko waxyeello Masiixa awgood. Haa, wali waxaan u arkaa inay waxyeello u geysaneyso aqoonta kartida leh ee Ciise Masiix, Sayidkayga. Waxaas oo dhami aniga ayay igu waxyeeloobeen aawadiis, waxaanan u arkaa inay cilad ku tahay inaan Masiixa ku guuleysto (Filiboy 3,7-8).
Tani waa xisaabta Bawlos ee faa'iidada iyo khasaaraha. Si kastaba ha noqotee, wuxuu yiri: Waxaan u arkaa waxa mar ahaan jiray faa'iidooyin in ay dhaawac ku yihiin aqoonta Ciise. Ahmiyadahaaga waxay noqon doonaan kuwo isku dheelitirnaan haddii aadan si buuxda diiradda u saarin shakhsiyadda Ciise Masiix, haddii aadan u tixgelin karin wax kale oo isaga la barbar dhigo inuu yahay dhib. Tani waa mid ka mid ah sababihii Bawlos u qabtay farxaddiisa inkasta oo uu xabsiga ku jiray markii uu qoray warqaddan.
Aynu soo qaadanno oraahda: Waxaan u arkaa inay tahay wasakh in lagu guuleysto Masiixa. Ereyga wasakh waxaa sidoo kale loo tarjumi karaa sida dhibacyada. Bawlos wuxuu noo sheegayaa in waxkasta oo aan haysano ay yihiin cilado aan qiimo lahayn Ciise la'aanteed. Caano, lacag, ama awood weligeed ma beddeli karto farxadda fudud ee ogaashada Ciise.
Adeeg ayaad kuheli doontaa hadaad mudnaanta siiso waxyaabaha aad mudnaanta siineyso. Ha ku lumin farxadda waxyaabaha aan muhiimka ahayn. Masiixu waa muhiim. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan muhiimad badnayn oo kugu sababi kara inaad lumiso farxaddaada adeegga kaniisadda. Dadku ma sameeyaan waxay rabaan. Kama muuqdaan markay u muuqdaan sidaad rabto. Iyagu waxba tari maayaan haddii aad caawiso. Dadku way ku niyad jabi doonaan. Haddii aad waxyaalahaas diirada saarto, waxaad si fudud lumi doontaa farxaddaada.
Bawlos wuxuu noogu sheegayaa warqaddan in aaney qusaynin nooca abaalmarinada aad haysatid, sida ay kaniisaddaadu u weyn tahay, ama imisa buug oo aad qoratay - waxaad ku heli kartaa dhammaan howlahaaga, laakiin weli waad faraxsan tahay. Bawlos wuxuu tilmaamay Filiboy 3,8 in noloshu ay ka kooban tahay isweydaarsiga waxyaalaha. Wuxuu u tixgeliyey inay tahay dhibaato oo dhan in laga helo Masiixa.
Ciise wuxuu wax kale ka yidhi ku saabsan sarrifka. Wuxuu noo sheegay in aanan u adeegi karin laba sayid. Waa inaan go'aan ka gaarno waxa ama kan noqon doona kan koowaad nolosheenna. Qaar badan oo naga mid ah ayaa doonaya Ciise iyo wax kale. Waxaan rabnaa inaan Ilaah ugu adeegno shaqada kaniisadda, laakiin waqti isku mid ah ayaan u qabannaa waxyaabo kale. Bawlos wuxuu noo sheegayaa inay tahay inaan ka tagno waxyaalahan oo dhan si loo ogaado Masiixa.
Sababta aan mudnaanta noo siineynay oo aan isku duubni nahay, sidaas darteedna wasaaraddeennu waa mid aan farxad lahayn maxaa yeelay waxaan ognahay inay tahay inaan ka tagno waxyaabo gaar ah si aan runtii ugu noolaano Masiixa. Waxaan ka baqeynaa in nala xadido. Laakiin si adag kama baxsan karno xaqiiqada. Markii aan u nimid Ciise, waxaan wax walba siinnaa. Arinta la yaabka leh ayaa ah, markaan sidaa sameyno, waxaan ogaanay inaysan waligeen sidan u fiicneyn. Wuxuu qaataa wixii aan siinay wuuna hagaajiyaa, dib u qaabeeyaa, wuxuu ku daraa macno cusub, wuxuuna dib noogu soo celiyaa qaab cusub.
Jim Elliot, adeegaha adeegayaasha ah ee ay dileen dadka Hindida ah ee ku nool Ecuador, wuxuu yiri: "Maahan doqon nacab siiya wax uusan haysan karin si uu u helo waxa uusan lumin karin.
Marka maxaad ka baqaysaa inaad dhiibto? Maxaa mudnaanta khaldan ku noqday noloshaada iyo adeeggaaga? Xiriirkii Masiixa miyaa lagu beddelay yoolalka kaniisadda?
Waa waqtigii dib loo habeyn lahaa waxyaabaha aad mudnaanta siineysay - oo farxaddiina mar labaad la heli doono.